Root NSI-189 Fosfate budada (1270138-41-4) - Phcoker
Root NSI-189 fosfate budada ayaa ah xarun isku-dhafan neerfaha oo badan oo leh sifooyin daaweyn maskaxeed leh potential.
Capacity: 1530kg / bishii
Raw NSI-189 Phosphate powder (1270138-41-4) video
RAJ NSI-189 Phosphate powder (1270138-41-4) Sharaxaad
Root NSI-189 Budos Phosphate waa wakiil cilmi baaris ah oo neurogenic iyo nootropic oo laga sameeyay nicotinamide iyo pyrazine. Dareemayaasha la isku haleynayey waxay muujiyeen in ay kicineyso nuurogenesis ama soo saarida unugyada unugyada maskaxda.
Daraasaadka xayawaanka, waxaa sidoo kale lagu muujiyey inay kordhinayso mugga hippocampus by 20% taas oo ka celinaysa calaamadaha asluubta ee niyad-jabka. Daraasaddan oo kale waxay muujisay in ay noqon karto daaweyn waxtarka leh ee niyad-jabka.
Roog NSI-189 Phosphate ayaa sidoo kale loo maleynayaa inay tahay daweyn balanqaad ah oo ku saabsan xaalad kale oo ay ka mid tahay cudurka "post-stress traumatic disorder" (PTSD), cudurka Alzheimer iyo dhibaatooyinka garashada ee da'da.
RAJ NSI-189 budada Phosphate (1270138-41-4) Smamnuucista
Product Name RAJ NSI-189 Budoonka Phosphate
Magaca Kiimikada UNII-HX0VO60T62;HX0VO60T62;AKOS030632361;Methanone,(2-((3-methylbutyl)amino)-3-pyridinyl)(4-(phenylmethyl)-1-piperazinyl)-, phosphate (1:1)
brand NAme RAJ NSI-189 Budoonka Phosphate
Fasalka Daroogada Nootropic
Molecular Wsideed 464.503 g / mol
Dhibicda Biyaha N / A
Color Cadaan si cad
Fasoracetam Application Waxaa loo isticmaalaa daaweynta xaalado kale oo ay ku jiraan jirro maskaxeed (PTSD), cudurka Alzheimer iyo dhibaatooyinka garashada ee da'da.
qaydhiin NSI-189 fosfate budada (1270138-41-4)
NSI-189 fosfate budada (1270138-41-4) Farsamaynta ficilada?
Farsamooyinka ficilka NSI-189 fosfate ayaa weli ah qarsoodi ganacsi. Waxaa la ogaaday in NSI-189 ay ku xidhan tahay qolka glucocorticoid ee maskaxda. Xakameynta gusocorticoid waxuu noqon karaa qaab jawaab celin ah oo hoos u dhigta cortisol. Cortisol waa hormoon cadaadis oo ku lug leh niyadjab iyo xanuuno kale oo la xiriira maskaxda.
Faa'iidooyinka of NSI-189 fosfate budada (1270138-41-4)
NSI-189 waa unug nootropic oo hadda lagu baranayo Neuralstem si loo isticmaalo daaweynta cudurada maskaxda sida niyad jabka iyo cudurada neurodegenere.
Waxaa laga yaabaa in la hagaajiyo murugada
talinayo NSI-189 fosfate budada (1270138-41-4) Qiyaasta
Sababtoo ah xaqiiqda ah in NSI-189 budada fosfate weli waa daawo tijaabo ah, weli ma jirin qiyaas go'an. Si kastaba ha ahaatee, inta lagu jiro tijaabada bukaannada ayaa la siiyey qiyaasta maalinlaha ah ee 40mg, 80mg, iyo 120mg qiyaasta ugu sareysa maalintiiba maalmaha 28. Muddadan, bukaannadu ma aysan soo sheegin dhacdooyin halis ah ama saameynaha, iyo NSI-189 phosphate ayaa lagu ogaadey inay si fiican u dulqaatay. Sidoo kale, waxaa jiray hoos u dhac weyn ee niyad-jabka iyo calaamadaha garashada ee bukaannada qaata qiyaasaha hoose ee 40mg iyo 80mg, laakiin maahan kuwa qaadanaya 120mg maalintii. Natiijooyinka hordhaca ah ee tijaabooyinku waxay taageerayaan fikradda ah in NSI-189 fosfate ay daweyn karto MDD. Si kastaba ha ahaatee, daraasado dheeraad ah oo ku saabsan qiyaasta iyo habka ficilka NSI-189 fosfate waa lagama maarmaan in lagu caawiyo xaqiijinta kormeerka horudhaca iyo caawinta ka soo baxa gebogebada.
Dhibaatooyinka ay keento of NSI-189 fosfate budada (1270138-41-4)
Dhibaatooyinka kale ee la soo sheegey waxay ahaayeen af ​​qallalan, madax-xanuun, madax-xanuun, madax-wareer, hurdo, daal, nasasho la'aan, hurdada tayada liidata, riwaayadaha / riyada dhabta ah, parathesia, hurdo la'aan, hyperthermia, lallabo, maqaarka xanuunka, iyo finan.